Dhibaatooyinka taabashada ee Debian? Waa tan xalka suuragalka ah | Laga soo bilaabo Linux
Dhibaatooyinka taabashada ee Debian? Halkan waa xalka suurtagalka ah
Mushkiladda (iyo xalka) aan kuugu soo wado ee xigta ayaa ka timid golahayaga, meesha isticmaalaha mok, ka dib markaad cusbooneysiiso kanaga Debian con KDE, wuxuu bilaabay inuu dhibaatooyin kala kulmo Xirfadlaha, kaas oo lumiyey qaabeyntii ay horey u laheyd.
Xalka dhibaatadaada waxaa soo bandhigay isticmaalaha josbergutiara taas oo u sheegtay waxyaabaha soo socda:
Waan haystaa Tijaabada Debian KDE (64-bit) la socota Kernel 3.10 iyo in marwalba la hagaajiyo Taabashada waxaan kaliya saxaa feylka soo socda:
Iyo wax yar ka hor safka bixitaanka 0 waa inaad kudartaa koodhka ay bixiso wiki at index 7.
Kaliya waxaa lagu darayaa nambarka soo socda waxyar uun kahor bixitaanka 0
Ha ka murugoon waxyaabaha kale ee faylka ah, taasi waa, ha ka saarin wax #, kaliya dhamaadka iyo wax yar ka hor safka bixitaanka 0 lambarka kor ku xusan waa in la dhigaa.
Waxay keydinayaan faylka oo kaliya ayaa u harsan in dib loo bilaabo PC-ga. Taasna waa inaad horey u haysataa taabta taabashada oo si sax ah u shaqeyneysa.
Xalkii hore ayaa la xaliyay (u qalantaa mudnaanta) dhibaatada saaxiibkeen. Sikastaba, haduu qof la kulmo isla xaaladaas, waxaad sameyn kartaa sida lagu sheegay Wiki-ka Debian:
Haddii aad isticmaaleyso taabashada guud, laakiin uma shaqeyneyso sidii la rabay, waad ordi kartaa amarrada soo socda si aad ugu shaqeyso isla markiiba:
Si isbeddelkani u noqdo mid joogto ah, samee feyl la yiraahdo taabasho taabasho.conf en /etc/modprobe.d/, oo wuxuu dhigaa khadka soo socda:
Looma baahna in la rakibo gsynaptics, synaptic, tpconfig ama wax ka bedel faylka xorg.conf. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad u gudbiso xulashada kernel qeybta 'psmouse module'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Dhibaatooyinka taabashada ee Debian? Halkan waa xalka suurtagalka ah
Elav, waad ku mahadsan tahay ninka. Salaan. 🙂
Waxaan xasuustaa in mar aan sameeyay oo ay dhaqaajisay dhagta laakiin ma aanan rogi karin. Waxaa laga yaabaa inaan sameeyo qoraal ku saabsan sidaan ugu xaliyay Openbox.
Waa hagaag, waxay faa'iido u lahaan lahayd kuwa isticmaala Crunchbang iyo / ama Debian + Openbox.
Aad ayey ii caawin laheyd maxaa yeelay dhibaatadaas ayaan qabaa 🙂
Fred roos dijo
Waa wax la aqbali karo oo ay tahay inaad wax ka bedesho feylasha qaabeynta iyo fulinta amarrada si aad awood ugu siiso wax fudud sida taabashada.
Hada waan fahmay markay dadku dhahaan Linux waa adagtahay
Jawaab Fred Roos
Aan aragno .. Si aan ololku u soo kicin, waxaan ugu jawaabi doonaa si xushmad leh. Linux ma adka, way adag tahay in la isku dayo in la beddelo injineerka maxaa yeelay soo saarayaasha ma rabaan inay la shaqeeyaan haddii aan lacag la siin. Laakiin xitaa way ka sii adag tahay in la aqbalo dad badan, in xitaa shaqo badan ka dib, aaladaha qaarkood ay ka shaqeeyaan sidii ay ka fiicnaayeen darawaladoodii asalka ahaa
julito 2086 dijo
Wanaagsan, way ii shaqeysay aniga Linux Mint Debian Edition, mahadsanid
Hello Elav, caarada waa mid aad u wanaagsan.
Gaar ahaan waxaan rabay in aan faallo ka bixiyo in ay xoogaa iga fiicneyd aniga in aan isticmaalo iswaafajin si aan ugu hagaajiyo qadka amarka, sida lagu sharaxay boostada 'Cookie' (https://blog.desdelinux.net/tip-activar-click-con-el-touchpad-en-openbox/). Wareejinta iyo isticmaalka faraha badan waa la qaabeyn karaa.
Xaqiiqdii waxa ugufiican ee ku saabsan softiweerka bilaashka ah ayaa ah in had iyo jeer ay jiri doonto in kabadan hal xalka dhib kasta oo ka dhasha nidaamkeena, waa kaliya arinta baaritaanka, aqrinta iyo wixii ka sareeya dhamaan akhrinta dukumiintiyada rasmiga ah ee kaladuwan iyo baakadaha kala duwan ee Gnu bixiyo. annaga / Linux, dabcan sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar ah in aan is taageerno beel ahaan, waxaan marwalba heli doonnaa gacan caawimaad ah oo diyaar u ah inay na caawiso, mahadsanid xusidda maalin uun waxaan qori doonaa maqaal ku saabsan dhabbaheyga iyo aragtidayda Dunida Linux, maxaa yeelay wax badan ayaan bartay oo waan ogahay muhiimadda ay leeyihiin bulshooyin adduunka ku nool oo raadiya xorriyadda iyo halka kuwa doonaya inay jabiyaan astaamaha dhaqanka ay rabaan inay naga reebaan ama ay u yimaadaan si loola dhaqmo dareen la’aan sida ay hadda ku dhacdo aniga shaqadayda, Dial maxaa yeelay Linux maahan wax fudud oo runtii wax walba Waxay kuxirantahay karti iyo habka aad ugu wajahantahay aqoon cusub sida ay sheegaan, ma jiro qof dhashay oo bartay oo wali waxaad kujirtaa waqtigii aad baran lahayd der ,,, sidoo kale waligeed kama daahin maxaa yeelay maalin kasta waxaan barannaa waxyaabo cusub.
Had iyo jeer faallo kama bixinayo, laakiin tani run ahaantii way ila shaqaysay
MAHAD BADAN!!! Waxay ii qabatay waxyaabo yaab leh !!
Waxaan bilaabay inaan dhexgalo Debian, waxaan raadinayay OS oo loogu talagalay netbook dhaqaale macquul ah leh, waxaanan rakibay Bunsenlabs, sii socoshada CrunchBang, hada aan isku dayno! BADAN GARCIAS mar labaad !!!
Aniga wax iima tarin aniga waxaan qabaa futada waxaanan isticmaalaa debian waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto
Samba: Ku soo biir Debian Windows Domain (I)
Laga soo bilaabo Linux: Bulsho lagu dhisay ixtiraam